Barcelona oo si dadban kaga hadashay wararka la xiriirinaya macalinka reer France ee Laurent Blanc – Gool FM
Barcelona oo si dadban kaga hadashay wararka la xiriirinaya macalinka reer France ee Laurent Blanc
(Barcelona) 23 Luulyo 2020. Kooxda Barcelona ayaa si dadban u beenisay wararka la xiriiranaya inay xiiseyneyso saxiixa macalinka reer France ee Laurent Blanc, si ay kaga dhigato badelka Quique Setién, haddii ay dhacdo inay shaqada ka ceyriso.
Wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyada ayaa sheegayey maalmihii la soo dhaafay in Laurent Blanc uu albaabada u furay shaqada tababarka ee kooxda Barcelona, isla markaana uu diyaar u yahay inuu noqdo badelka tababare Quique Setién.
Sida la soo xiganayo, Ilo wareedyo kooxda Barcelona ah ayaa waxay u xaqiijiyeen wargeyska “AS” ee dalka Spain in macalinka reer France ee Laurent Blanc uusan qeyb ka aheyn qorshaha kooxda gabi ahaanba.
Wargayska ayaa ku cadeeyay warbixintiisan in Barcelona ay hadda diirada saareyso tartanka Champions League oo kaliya, isla markaana aysan ka fikireyn arrimaha kale ee la xiriira is badalka shaqaalaha farsamada ee uu hoggaaminayo tababare Quique Setién.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in xitaa haddii ay dhacdo in tababare Quique Setién laga ceyriyo shaqada tababarka ee kooxda in Laurent Blanc uusan qorshaha ugu jirin maamulka naadiga Barcelona.
Waa run inay Barcelona ixtiraamto falsafadda macallinka reer France ee Laurent Blanc iyo guulaha uu gaaray, balse xaqiiqda ayaa ah inuusan qabanin wax shaqo ah ee la xiriira tababarka koox ama xul qaran tan iyo 2016-kii, taasoo ka dhigi karta xulasho halis ah.
Kooxda Arsenal oo isbedel ku sameysay tiro ka mid ah Lambarrada xiddigaheeda… (Bukayo Saka oo xiran doona lambarka…)
Muxuu u baahan yahay inuu sameeyo Cristiano Ronaldo si uu markiisii Shanaad u xaqiijiyo ku guuleysiga Kabta Dahabka ah ee Yurub?